Fikarohana momba ny firaisana Tantara miforimpona momba an'i Paul Gauguin | Peter Teekamp sy Mette Gauguin | Michelle Moshay - Fikarohana Reincarnation
Ahoana no nahatonga izany? Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany, Fanahy Masina sy tari-dalana enti-mampianatra
Mpikaroka: Peter Teekamp sy Michelle Moshay
Sasin-teny: Ny fampivoarana ara-javakanto dia novolavolaina tamin'ny raharaha momba ny Zandriny
Ny fampitahana sary eo amin'ny ankavanana dia maneho ny fomba namokafan'i Peter Teekamp ny fivoaran'ny kanto Paul Gauguin. Ity sary ity, ary koa ireo sary rehetra eto amin'ity pejy ity, dia azo ampitomboina amin'ny fametrahana ny mpandika ny sary. I Peter dia nanoratra ireo sary ireo ho toy ny zatovolahy, am-polo taona talohan'ny nahitany ny endriky ny Gauguin mifanaraka amin'ny fiainany ankehitriny, mampiseho ny fivoaran'ny zavakanto artista.
Tsy nanaiky tanteraka ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao an'i Gauguin i Peter hatramin'ny taona 2005, raha nanatrika fihaonambe izy, izay nampiantranoin'i Norm Shealy, MD, PhD tao amin'ny toeram-pamboleny tany Missouri. Tao dia nihaona tamin'ny hafa i Peter, toa an'i Norm sy Wayne Peterson, izay nahafantatra ny fiainana taloha koa. Ny tantaran'i Peter dia nisy dikany bebe kokoa tamin'ny toe-javatra niseho tamin'ny tranga teraka tao amin'ny vatana hafa.
55 taona i Peter tamin'izay. Nanohana aho fa i Peter no teraka tao amin'ny vatana vaovao tao Gauguin, saingy nanamarika fa ny sary hosodoko nataon'i Peter hatramin'izay dia tsy nitovy tamin'ny an'i Gauguin. Fa kosa, ny asan'i Peter dia nanjary zava-misy sy tsy azo antenaina mihitsy. Ohatra iray amin'ny asan'i Peter ankehitriny dia ny fanehoana ny Volana, voalaza etsy ambany. Nanontaniako i Peter raha afaka nandoko toa an'i Paul izy, satria mety hanampy ny hafa hieritreritra izany fa mety ho ny vatana vaovao indray i Paul.
Taorian'izay, dia tsy nahavita namorona sary hosodoko tondraka nalain'i Paul Gauguin i Peter. Ao amin'ity pejy web ity, ny hosodoko Gauguin dia ampitahaina amin'ny nataon'i Peter. Fampisehoana an-tsehatra na synchronisme dia hita ao amin'ny famoronana an'i Peter tamin'ny alàlan'ny 55, tahaka ny nahafatesan'i Paul Gauguin tamin'ny taona 55. Toy ny hoe natsangana tamin'ny maty i Petera tamin'izay fotoana izay.
Amin'ny maha-zazalahy azy, i Peter dia mihaino feon-kira momba ny fiainana lava ao an-tsainy: "Gauguin"
Ny tantaran'i Peter Teekamp dia nanomboka tamin'ny fahazazany, raha niditra tao an-tsainy foana ireo teny hoe "Go-Gone, Go-Gone". Amin'ny maha-zazalahy folo taona dia hampiasa izany ho fifaliana i Peter rehefa milalao. Nikiakiaka izy hoe: “Mandehana, Mandehana!”
Mampahatsiahy ny tranga izany Francesco Foscari | Wayne Peterson, raha nanizingizina i Wayne fa "Francesco Forscari" marina tokoa ny anarany, ary tsy nahatakatra hatramin'ny am-polo taona maromaro taty aoriana fa i Francesco Foscari no anarany taloha.
Ho an'i Peter, efa am-polony taona maro talohan'ny nampidirany ny teny hoe "Go-Gone" miaraka amin'ny artista Paul Gauguin ary na dia efa ela kokoa aza izy no nihevitra fa mety ho ny vatana vaovao indray ny Gauguin. Alohan'ny hanohizantsika ny dia nataon'i Peter dia andeha isika handinika ny fiainan'i Gauguin.
Ny fiainana sy ny fahafatesan'i Paul Gauguin
Teraka tany Paris tamin'ny volana 7 tamin'ny Jona 1848 i Paul. Ny rainy dia mpanao gazety frantsay ary ny reniny dia avy any Peru.
Tamin'ny taona 1849, fony vao herintaona i Paul, dia maty teo amoron-dranomasina nankany Amerika Atsimo ny rainy. Nentin'i Neny tany Peroa ny reniny, ary nandany ny fahazazany nandritra ny fahazazany izy. Niverina tany Frantsa izy, rehefa nanatrika sekoly fianarana katolika. Ny fampiofanana Katolika Paul dia hisy fiantraikany be eo amin'ny toetrany. Maty tao amin'ny 1867 ny reniny, tamin'izy 19 taona.
I Paul Gauguin no mitety an'izao tontolo izao ary mipetraka any Paris
Nanjary tantsambo i Paul avy eo, namakivaky an'izao tontolo izao niaraka tamin'ny Maritioran'ny Merchant Frantsay, avy eo niasa tamin'ny tafika frantsay. Tamin'ny 1872, fony 24 izy, niditra tao amin'ny tontolon'ny raharaham-barotra i Paul ho toy ny mpivarotra. Nandritra io vanim-potoana io, dia nanomboka nandoko ny fotoanany izy. Hanohy hiasa amin'ny raharaham-barotra nandritra ny folo taona mahery izy, talohan'ny nanolorany ny fiainany handrakitra manontolo andro.
Tamin'ny 1873, tamin'ny faha-25 taonany, dia nanambady an'i Mette Gad i Paul. Hiteraka dimy ny mpivady amin'ny farany. Nandritra io fotoana naha-olon-dehibe azy io dia nampiarahan'ny mpanakanto Pissarro sy Cezanne namana i Paul. Tamin'ny 1880, rehefa 28 taona i Paul, dia nekena ny sary hosodoko iray ho an'ny Salon d'Automne, fampirantiana zavakanto malaza any Paris.
Tamin'ny 1884, Paul dia nifindra ny fianakaviany tany Copenhagen, any Danemark, firenena niavian'ny vadiny. Herintaona taty aoriana, tamin'ny 1885 ary tamin'ny faha-37 taonany, dia nisaraka tamin'i Mette i Paul ary niverina tany Frantsa izy mba ho lasa mpanakanto amin'ny fotoana maharitra. Rehefa tafaverina izy, ny iray amin'ireo sary hosodoko voalohany dia ny fizahana iray avy tao amin'ny tanànan'i St. Cloud, ivelan'ny Paris, mitondra ny lohateny hoe, "Paysage a Saint-Cloud." St. Cloud, izay ho hitantsika, dia hanana ny lanjany ihany koa amin'ny fiainan'i Peter Teekamp.
Paul Gauguin sy Van Gogh any Arles, Frantsa
Tao amin'ny 1887, i Paul dia niasa vetivety ho an'ny tetikasa Panama Canal ho toy ny mpitrandraka kanalika ary dia nandeha tany Martinique, nosy iray any Karaiba izy. Rehefa tonga tany Frantsa izy, dia lasa mpinamana tamin'i Vincent Van Gogh, izay nosoratany tany Arles, any atsimon'i Frantsa. Van Gogh sy Paul dia nizara trano iray ary tao anatin'izany toe-javatra izany no nanapaka ny sofiny tamin'ny Desambra 23, 1888, ary avy eo dia nanolotra mpivaro-tena izy.
Nilaza i Paul fa nandrahona azy tamin'ny razoara i Van Gogh ny andro talohan'ny loza. Ny andro taorian'ny nanongan'i Van Gogh ny sofiny dia nandao an'i Arles i Gauguin.
Nandritra ny androm-piainany tao Arles, nanomboka tamin'ny febroary ka hatramin'ny desambra 1888, i Paul dia namelatra ny fomba amam-pahaizana fantany, amin'ny fampiasana loko madio sy madio amin'ny rindrina mainty. Matetika ny foto-pinoana misy azy dia misy foto-pinoana kristianina. Na dia hanjary hanaja an'i Paoly amin'ny hoavy aza ny tontolo zavakanto, amin'izao fotoana izao, dia tsy fantatra sy tsy mahantra izy.
Paul Gauguin any Tahiti
Nanjary tsy nino ny fiainana tany Eoropa i Paoly. Tao amin'ny 1891, tamin'ny taona 43, namidin'i Paul ny sary hosodoko 30 mba handoavana ny lalany avy any Frantsa mankany Pasifika Atsimo, izay niorenany tao Tahiti. Tamin'izany fomba izany dia nitady fomba tsotra kokoa izy. Nandritra ny roa taona nanaraka, dia naka sary avy any Pasifika Atsimo i Paul. Ao Tahiti no hamokarana ireo asa tanana malaza indrindra.
Raha tany Tahiti, dia nandositra vola i Paul ary tsy maintsy niverina tany Frantsa izy tamin'ny 1893. Avy eo izy dia niverina tany Tahiti tamin'ny 1895 tamin'ny taonan'ny 47, tsy hahita an'i Eoropa indray. Nandritra ny dimy taona i Paul dia nandany ny fahantrana maharitra sy niharatsy ny fahasalamana.
Nanjary kivy i Paoly ary niezaka namono tena tamin'ny 1897, fony izy 49 taona. Tsy maty izy.
Ny fahafatesan'i Paul Gauguin tany amin'ny nosy Marquesas
Nandritra ny 1901, nihanahantra sy nifanandrina tamin'ny manampahefana Frantsay tao Tahiti i Paul dia nifindra tany amin'ny Nosy Marquesas. Maty tamin'ny taona 55 izy, tamin'ny volana 8. 1903, ary nalevina tao amin'ny Fasan'ny Kalvary.
Tao anatin'ny taona faramparany dia nanoratra i Paul hoe: "Ho an'ny maro an'isa, hijanona ho enigma foana aho, tsapako fa tsy dia hahatakatra firy ny olona aho… Na inona na inona zava-mitranga, manome toky anao aho fa hahatratra ireo zavatra tamin'ny filaharana voalohany. Afaka mahatsapa izany aho ary hahita isika. ”
Marina ny faminanian'i Paoly. Tamin'ny 1906, telo taona taorian'ny nahafatesany, dia naseho tao amin'ny Salon d'Automne ny sangan'asany, izay nanombohan'ny lazany sy ny lazany.
Peter Teekamp ho fampianaran'i Paoly Gauguin
Peter Teekamp dia teraka tany Holland, Netherlands, tamin'ny 1950, 47 taona taorian'ny fahafatesan'i Paul Gauguin. Katolika ny rain'i Peter, raha jiosy kosa ny reniny.
Ny ray aman-drenin'i Peter dia nanana olana ara-panambadiana ary nisaraka tamin'izy efa-taona i Peter. Napetraka tao amin'ny trano fitaizana zaza kamboty katolika iray izy, ary lasa zazalahy alitara ary nihira tao amin'ny amboarampeon'ny fiangonana. Tamin'ny sivy taona dia nanambady indray ny renin'i Peter ary nandeha nipetraka niaraka tamin'ny reniny jiosy sy raikeliny vaovao i Peter.
Anaram-piainana taloha, Gauguin, ao amin'ny lohan'i Peter Teekamp: "Go-Gone, Go-Gone"
Araka ny nomarihina, rehefa feno folo taona izy, dia nisy vaninteny roa tonga tao an-tsain'i Peter hoe "Go-Gone, Go-Gone." I Peter kely dia tsy nampifandraisina na inona na inona dikany manokana amin'ireo teny ireo, fa nahafaly azy izany. Rehefa nilalao izy dia nikiakiaka i Peter hoe: "Go-Gone, Go Gone," am-pifaliana.
Tamin'ny faha-XNUMX taonany vao nanomboka nanontany tena izy hoe inona ny dikan'ilay hoe "Go-Gone". Nanontany an'ireo mpampianatra azy izy hoe: "Inona no dikan'ny Go-Gone?" Ireo mpampianatra azy, nieritreritra fa nanontany momba ny teny holandey izy, dia nilaza taminy fa tsy misy teny toa izany amin'ny fiteny holandey.
Aroso amintsika fa i Peter dia nahatadidy ny anarany hatramin'ny fahazazany taloha, fa ny "Go-Gone" dia fanononana tononkalo an'i Gauguin. Ity karazana fahatsiarovana ity dia voamarina ihany koa tao amin'ny raharaha fanambadiana teraka tao amin'ny diplaomaty amerikana Wayne Peterson. Amin'ny maha zazalahy kely azy dia tsy hamaly ny anarany i Wayne rehefa niantso azy ny ray aman-dreniny. Sorena izy ireo ka nanontany hoe: “Ka inona no tianao hiantsoana anao?”
Nanambara i Wayne, "Francesco Foscari no anarako," na dia tsy fantany aza ny antony naniriany nantsoina an'io anarana manokana io. Naharitra am-polony taona maro i Wayne vao nahalala ny anarany hoe Francesco Foscari tamin'ny andro taloha. Raha te hahalala bebe kokoa dia mandehana any amin'ny: Trangam-panjakan'olo-n'i Francesco Foscari | Wayne Peterson
Ny talenta taloha momba ny fiainana taloha sy ny famerenana amin'ny laoniny ny sketches an'i Gauguin tamin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Tamin'ny naha-zatovo azy dia nanomboka nanao sary i Peter. Araka ny voalaza etsy ambony, ny fandinihana miavaka dia ireo sary nataon'i Peter tany am-boalohany izay nahavita zato taona talohan'izay, na dia tsy nahalala momba ireo sary Gauguin ireo aza i Peter rehefa nanintona azy ireo.
Raha ny marina, tsy nijery ny endriky ny Gauguin i Peter Teekamp mandrapahatongan'ny 2003, fony i Peter dia 53 taona. Noho izany, i Petera dia naka indray ny fahatsiarovany ny zavakanto tamin'ny androm-piainany taloha, ny androm-piainan'i Paul Gauguin.
Ny tena mahaliana dia ny famerenan'i Peter tsy misy fahatsiarovan-tena ny zava-kanton'i Gauguin tamin'ny taona mbola kely kokoa noho ny tamin'ny nanaovan'i Gauguin ireo sary. Araka izany, ity trangan-javatra ity dia mampiseho fa isaky ny androm-piainantsika dia tena miorina amin'ny zava-bitan'ny nofo taloha isika.
Nirotsaka an-tsehatra i Peter Teekamp, ​​tahaka an'i Paul Gauguin
Nahazo mari-pahaizana momba ny varotra i Gauguin ary niditra tao amin'ny sehatry ny raharaham-barotra. Peter dia niasa ho mpitantana ny varotra isan-karazany nandritra ny taona. Tahaka an'i Gauguin, i Peter dia lasa mpizaha tany eran'izao tontolo izao, nitsidika toerana toa an'i Inde, Isiraely, Portiogaly ary Ejipta, niaina tao amin'ireny toerana ireny nandritra ny fotoana maro, nandany ny lalany tamin'ny alàlan'ny sary hosodoko.
Paul Gauguin & St. Cloud any Minnesota sy France
Nifindra tany Etazonia i Peter tamin'ny farany. Tamin'ny 1972, Peter dia nipetraka tany amin'ny toerana rehetra, St. Cloud, Minnesota, toerana nanombohany nandoko tamin'ny fomba matotra tamin'ny faha-22 taonany. Mampatsiahy an'i Gauguin niverina tany Frantsa avy any Copenhagen io, ho lasa mpanakanto feno- fotoana. Tsarovy fa ny iray amin'ireo sary hosodoko voalohany nataon'i Gauguin, rehefa niverina tany Frantsa izy dia "Paysage a Saint-Cloud," izay midika hoe "natiora" na ny tontolon'ny Saint Cloud. Hay i St. Cloud, Minnesota dia nomena anarana taorian'ny tanàna St. Cloud, France.
Inona no fifandraisana misy eo amin'i St. Cloud, France sy St. Cloud, Minnesota? Mino aho fa ny zava-mitranga dia ny fahafantaran'ny olona iray tsy misy fahatsiarovan-tena fa ny toerana dia misy dikany an'ohatra hatramin'ny fahavelony lasa. Na dia tsy fantatr'i Peter aza fa manana heviny an'ohatra ho azy i St. Cloud hatramin'ny fahaveloman'ny Gauguin, mino aho fa nisy ny fanekena sy fisarihana tsy fahatsiarovan-tena avy tamin'ny fanahiny, izay nisy fiantraikany tamin'ny fanapahan-kevitr'i Peter hipetraka ao St. Cloud.
Nolazaina momba ny fiainana taloha tany Frantsa i Peter
Nanambady vehivavy iray tany Minnesota i Peter, ary nanan-janaka roa. Mbola nitantana ny fivarotana varotra ihany i Peter, ary nanohy ny asany ho toy ny mpanao hosodoko. Nandray anjara tamin'ny sehatry ny zavakanto izy, izay hivarotany ny zavakanto.
Imbetsaka tamin'ireny foara ireny no nisy olona tonga tampoka taminy ary nilaza taminy ny fiainany taloha. Nisy olona nilaza tamin'i Paul fa efa nipetraka tany Frantsa izy taloha, ny iray kosa nilaza taminy ny anarany dia Paul tamin'ny naha nofo azy taloha. Tsy fantatr'i Peter izay hatao amin'ireo fanehoan-kevitra ireo, na dia nisokatra ho amin'ny vatana vaovao indray aza izy.
Peter dia nitantara tamiko fa fony izy 19 taona dia namaky an'i Siddhartha, nosoratan'i Herman Hesse. Tamin'izany fotoana izany dia nanatsoaka hevitra i Peter fa ny reincarnation no hany filozofia ara-panahy izay maneho ny “fahamarinana sy ny hitsiny”, izay manome “vintana mitovy ho an'ny rehetra.”
Na izany aza, tao amin'ny 1970 voalohany, i Peter dia tsy nieritreritra hoe iza izy no mety ho efa ela niainana ary ny fanehoan-kevitr'ireo mpitsabo sivily momba ny fiainana teo aloha tany Frantsa, izay i Paul no anarany, dia nampionona azy fotsiny tsy misy intsony.
Manana fanovàna ara-pinoana i Angela ary manambara an'i Peter hoe Paul Gauguin, Reincarnated
Niova ny tao 1979, fony i 29 taona i Peter. I Angela vadiny dia nanomboka nanao fiovana lehibe teo amin'ny toerany, ka nanjary mpivavaka lalina izy. Na dia nanaja ny filany aza i Petera voalohany fa mila ara-panahy bebe kokoa, dia nanjary niahiahy izy fa nanjary nihetsiketsika ny fomba fiainany vaovao.
Indray andro, niditra tao amin'ny efitrano iray tao an-tranon'izy ireo i Peter ary nahita ny vadiny nivavaka niaraka tamin'ny labozia nirehitra. Nitsangana i Angela ary nanolotra boky iray an'i Peter izay nivelatra tamin'ny sarin'i Paul Gauguin, voahodidin'ny loko mena. Nolazain'i Angela tamin'i Peter, tamim-piekena lalina hoe: "Ianao no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray Paul Gauguin," fanambarana iray naverimberiny taminy taorian'izay.
Fantatr'i Petera fa tahaka an'i Paoly izy ary manafina endrika amin'ny sary hosodoko, tahaka ny nataon'i Gauguin
Ny fanizingizinan'i Angela fa Gauguin izy dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray dia nahatonga an'i Peter hisaintsaina ireo teny hoe "Go-Gone, Go-Gone," izay niverimberina tao an-tsainy nandritra ny fahazazany. Tsikaritr'i Peter ihany koa fa ny endriny dia mitovy amin'ny an'i Gauguin.
Taoriana kelin'izay dia hitany fa tian'i Gauguin ny endriky ny sary eo amin'ny sary sokitra, indraindray miseho ivelany, indraindray miafina, fanao iray izay efa nipoitra ihany koa i Peter. Ohatra, ao amin'ny faritry ny tendrombohitra Arizona izay omena etsy ambany, tsindrio ny sary mba hampitomboana sy hanamarihana ny tarehimarika mandainga eo am-piandohana izay mitraka.
Horonan-tsary iray manambara ny fomba fijerin'i Gauguin ny sary eo amin'ny sary hosodoko Sary miafin'i Paul Gauguin. Lahatsary iray hafa mampiseho endrika miafina amin'ny asan'i Peter no mitondra ny lohateny Mandeha ny jono.
Na dia teo aza ireo fihetsika ireo teo amin'ny fiainan'i Piera sy i Paoly, dia mbola hafahafa loatra tamin'i Petera ny mieritreritra fa mety ho ny vatana vaovao indray ao Gauguin.
Namorona karazana natiora i Peter, toy ny nataon'i Paul Gauguin
Peter sy Angela dia nitombo nandritra ny taona maro ary na dia teo aza ny fiezahana hitahiry ny fanambadian'izy ireo dia nisaraka ihany izy mivady. Nifindra tany Apache Junction, Arizona i Peter, ary nanokatra tranokala zavakanto izy. Nahasarika ny kolontsaina Amerikana Teratany Andrefana i Peter, toa an'i Gauguin nanintona ny fiainana tahisianina. Ny sary hosodoko nataon'i Peter nandritra io vanim-potoana io dia nanasongadina lohahevitra Amerikanina tompon-tany.
Ny fihemoran'ny fiainana taloha nataon'i Peter Teekamp
Fotoana vitsy taorian'ny nifindrana an'i Apache Junction, dia nihaona tamin'ny vehivavy iray izay nandao ny fiainam-pianakaviana i Peter ary nanapa-kevitra ny hanome azy io ezaka izany. Nanamafy izany i 1980, fony izy 30. Tao amin'ny famerenana azy, dia naheno fahatsiarovana izy nandritra ny androm-piainany izay tena nandoko azy.
Nahita lalana teny an-dalamby tany amin'ny tanàna iray i Paris, angamba i Paris. Hitany fa niakatra ny tohatra maizina tao amin'ny efitrano iray izay maizina sy maloto; Hita fa tsy nodiovina nandritra ny taona ny efitrano. Nandinika borosinify maloto sy malina i Peter, ary nahatsapa fahaketrahana ketraka izy, toy ny mbola tsy niainany hatramin'izay. Nahatsapa ho manirery, fandavana ary fahatsapana fa diso hevitra izy.
Na efa nihemotra teo amin'ny fiainan'i Gauguin ny fiainany taloha, dia tsy azony antoka. Saingy ny traikefa an-kery dia mahery ary nahatonga azy hianatra ny Gauguin hentitra kokoa hatrany. Izay tsy hitany anefa dia tsy tiany.
Peter Teekamp Manadio ny endriky ny paozin'i Paul Gauguin
Voalohany indrindra, tsy tian'i Peter ny fomba fanaon'i Gauguin momba ny sary hosodoko, izay hitany fa «sariitatra, tsotra ary tsy vita». Araka ny voalaza, nandritra ity androm-piainana ity dia namolavola fomba iray i Peter izay tena misy zava-misy. Eny tokoa, tamin'ny kanto nahazo aingam-panahy tao Gauguin noforonin'i Peter hatramin'ny 1995, ny loko sy ny fahatsapana dia mitovy amin'ny an'i Gauguin, saingy ny dikantenin'i Peter dia manana famaritana bebe kokoa.
Ny sary hoso-doko izay mampiseho ny fivoaran'ny fomba fanaon'i Peter dia ny sarin'i Gauguin an'ny zanany vavy, Aline, ary ny sarin'i Peter an'i Amanda, zazavavy iray maty tamin'ny fiterahana. Ny renin'i Amanda dia naniry ny sarin'ny zanany vavy mbola tsy teraka ary nangataka tamin'i Peter izy mba hamorona sarin'i Amanda, izay mazava ho azy fa tsy mbola hitan'i Peter. Araka izany, sarina mpanakanto tokoa ny sarin'i Amanda, satria maty izy vao teraka.
Mahaliana ny manamarika ny fitoviana eo amin'ny fisehoan'i Aline, zanakavavin'i Gauguin, sy Amanda. Ny sary hosodoko Amanda, na dia mitovy aza ny endriny, dia mbola misy zava-mitranga kokoa amin'ny zavatra maro amin'ny antsipiriany napetraka ao ambadiky ny fisaintsainana ny fomba nipetrahan'i Peter tamin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Mahatsiaro an'i Hama i Paoly
Ho fanampin'ny zava-misy fa tsy tena nankasitraka ny kanton'i Gauguin i Peter dia nisy zavatra hafa koa nanakorontana an'i Peter. Ohatra, tsy tian'i Peter ny fahitan'ny sasany fa nandao ny vady aman-janany i Gauguin hanaraka ny asany amin'ny kanto. Farany, Gauguin dia maty tamin'ny aretin'ny venereal, izay tsy hitan'i Peter fa mendri-piderana. Raha fintinina dia tsy tian'i Peter io lehilahy io, Gauguin.
Nanambara ny mpiangona iray mpirotsaka an-tsitrapo fa i Petera no Fampianaran'i Paoly Gauguin
Valo taona monja taorian'izay vao nipoitra indray ilay olana momba ny vatana vaovao indray. Tao amin'ny Apache Junction, Arizona, tao 1988 fony i Peter dia 38 taona, dia noraisin'ny mpitsabo iray mpitsabo izy, izay lehilahy be dia be sy matanjaka tamin'ny faha-50 taonany. Nandritra ny roa volana teo ho eo, io mpitsabo io dia nitondra an'i Petera ho misakafo na misakafo roa na intelo isan-kerinandro.
Na dia nankasitraka ny hatsaram-panahin'ilay lehilahy aza i Peter, dia nanomboka nanontany tena izy hoe inona no antony nanosihosena an'io lehilahy io. Peter dia heterosexual, ka tsy tiany ny mpitsabo kiropractika hanana fanantenana romantika. Nanapa-kevitra ny hiatrika an'io olana io i Peter amin'ny iray amin'ireo fivorian'izy ireo.
Taorian'ny nanontanian'i Peter ilay lehilahy momba ny antony maha-malala-tanana azy, mena ny tavan'ny mpitsabo ary nitsangana izy nisambotra an'i Peter tamin'ny akanjony. Nanintona ny tarehin'i Peter tao anatin'ny dimy santimetatra ny tarehin'ilay lehilahy ary nanambara izy hoe: "Ianao no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray Paul Gauguin."
Gaga i Peter, satria tsy niaina akory ny fofonainy tamin'ilay mpitsabo aretin-tsaina momba an'i Gauguin; ny mpitsabo dia tsy nanana fomba hahafantarana ny zavatra niainany taloha momba an'i Gauguin! Namela an'i Peter ilay mpitsabo avy eo ary lasa. Tsy nahita azy intsony i Peter. Ankehitriny dia nilaza tamin'i Peter ny olona roa, ny vadiny taloha, Angela, ary ilay mpitsabo kiropractika, izay saika vahiny, fa izy dia teraka tao amin'ny vatana vaovao tao Gauguin. Ny olana dia mbola tsy te ho Gauguin i Peter.
Ny famonoana an'i Paul Gauguin famonoan-tena dia naverina tao amin'ny Mountain Superstition
Ny fisehoan-dranon-drano dia nitranga herintaona taty aoriana tamin'ny 1989, rehefa 39 taona i Peter. Niditra tampoka ny tompon-trano tao amin'ny galerian'i Peter tao Arizona ary nilaza tamin'i Peter fa voaroaka izy. Notantarain'ny tompon-trano fa nanao sonia fifanekena i Peter izay misy fehintsoratra ao aminy ahafahany mandroaka an'i Peter tsy misy fampandrenesana ary manala azy avy hatrany ny tompon-trano, satria nahazo tolotra tsara kokoa izy. Ka saika hakatona ny asan'i Peter.
Tamin'io herinandro io ihany, ilay vehivavy niaraka taminy dia niaraka taminy ary i Peter dia nandray anjara tamin'ny lozam-piarakodia lehibe izay nahitana ny fiarany. Tampoka teo dia tsapan'i Petera fa very ny zavatra rehetra nananany teto an-tany izy ary lasa namono tena.
Nanapa-kevitra ny hamono tena tany an-tany efitra i Petera. Nividy pistola sy tavoahangin-jazakely iray izy ary nandeha tany an-tendrombohitra. Soa ihany fa tsy mpiboboka i Peter ary na dia nitifitra sasantsasany tao anaty rivotra tany an-taniefitra aza izy dia niala tamin'ny alikaola i Petera talohan'ny nahafatesany.
Tadidio fa niezaka namono tena i Gauguin. Nahoana no haverina io modely io? Araka ny fijeriko dia manana hery mitovy ihany izahay, fomba iray ihany amin'ny fiainana, avy amin'ny fampodiana ho an'ny hafa. Noho izany dia manana ny fironana hiditra amin'ny karazana olana sy fifandonana ihany koa isika; Mihevitra ny fanamby amin'ny fomba mitovy ihany koa izahay.
Gauguin sy Teekamp dia samy niaina fiainana miorina rehefa nanao raharaham-barotra nentim-paharazana izy ireo ary nahazo tombontsoa ara-bola, saingy samy nanome antoka izy ireo fa hanohy ny nofinofy amin'ny maha-mpanakanto azy. Samy nanjary kivy sy namono tena izy ireo, ho setrin'ny fahaverezana sy ny krizy ara-bola, na dia samy tsy nahomby aza izy ireo tamin'ny fiezahany.
Reincarnation & Replication of fitondran-tena avy amin'ny nofo iray hafa mankany amin'ny iray hafa
Manana modus operandi isika rehetra izay manoritra antsika. Manana fitondrantena izay mifanaraka amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa, ny sasany tsara ary ny sasany izay tsy marim-pototra. Ireo valinteny Maladaptive dia manakorontana antsika, na dia manantena antsika mandritra ny androm-piainana aza, dia manova ireo toetra ireo ho tombontsoantsika.
Ny fampanantenana lehibe amin'ny fahatakarana ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana dia ny hoe rehefa fantatsika momba ny fiainantsika taloha isika ary afaka mandalina ny toetra amam-panahy avy amin'ny taloha, dia afaka mitombo kokoa amin'ny fomba mahomby sy mahomby amin'ny fampodiana antsika ankehitriny.
Taorian'ny fikasana hamono tena, nivezivezy nankany Californie i Peter ary niarahan'izy ireo tamin'ny fiainany efa niainany tahaka an'i Paul Gauguin
Rehefa nifoha ny ampitso maraina teny an-tany efitry ny tany efitra i Petera, dia nahantona izy ary nanana aretina goavana. Nanapa-kevitra i Peter fa mila manomboka fanombohana vaovao izy ary nanapa-kevitra fa tokony hifindra tany Californie izy. Nieritreritra koa i Petera fa nandainga momba ny androm-piainany Gauguin izy ary na dia tsy te ho fananganana ny vovoka tany vaovao tany Gauguin aza izy, dia handinika ny mety ho fifandraisany amin'ny fiainana niainana miaraka amin'ny fisokafana lehibe kokoa.
Rehefa tafaverina tao amin'ny Apache Junction i Peter dia niantso ny mpampiasa azy taloha, tompona rojom-barotra, ary faly izy nandre fa ny lehibeny taloha dia tsy hoe manana asa ho azy fotsiny ao Atascadero, California, fa handeha handefa ity mpampiasa ity kamio haka azy. Taratra i Peter fa hatramin'ny nanapahany hevitra hijerena ny androm-piainan'i Gauguin am-pitandremana kokoa, dia toa nandeha tamim-pilaminana kokoa sy tamim-pandosirana ho azy ny raharaha; Nilaza i Peter fa "namelana" ny fiainana ho azy.
Paul sy Mette Gauguin, tafaray amin'ny alalan'ny fanambadiana
Nanao tsara ny fivarotana fivarotana tao Atascadero i Peter ary navotsotra tamin'ny fitantanana foibe fivarotana manontolo tao Hollister, Kalifornia. Tao, tao amin'ny 1991 fony izy 41, nihaona tamin'i Michelle Moshay i Peter, izay niasa tamin'ny gazety iray tao an-toerana nivarotra ny toerana fanaovana dokam-barotra. Peter, solontenan'ny toeram-pivarotana sy ny fividianana fividianana, dia tonga mpanjifan'i Michelle, nametraka dokam-barotra tao amin'ny taratasy niasany.
Tao amin'ny 1997, tamin'ny taona 47, nanapa-kevitra ny ho tonga mpanakanto mpanao famolavolana gazety i Peter, mba hanamafisana kokoa ny fiantsoana sy ny fisainany. Amin'io andraikiny io dia lasa mpandaha-teny i Michelle momba ny varotra gazety. Tamin'io fotoana io i Petera sy Michelle dia nahatsapa fifanoherana lalina sy nifankatia.
Nanomboka nizara antsipiriany momba ny fiainany i Peter, anisan'izany ny tantaran'i Gauguin. Tsy mpino tao amin'ny vatana vaovao indray i Michelle tamin'izany, fa nisokatra kosa. Avy eo dia nizara tamin'i Peter ny fisehoan-javatra mampiavaka ny tenany manokana momba an'i Gauguin. Michelle, eny an-dalana, dia 41 taona fony izy nihaona tamin'i Petera.
Ny fiainan'i Michelle teo amin'ny fiainan'i Paul Gauguin
Tamin'ny 1978, fony izy 22 taona, ny dadan'i Michelle dia nanolo-kevitra ny hanao famatsiam-bola hitsangatsangana amin'izay toerana tiany haleha eto an-tany. Nisafidy ny handeha any Tahiti i Michelle ary rehefa teo izy dia nitsidika ny Gauguin Museum.
Ny taona nanaraka dia nandeha tany Paris i Michelle. Nandeha an-tongotra teo amin'ny Seine izy teo amin'ny mpitaingin-tsoavaly iray antsoina hoe Wandering Wasp (Les Guepes Buissonniere). Tsara homarihina fa novan'i Gauguin ny famoahana boky tao Tahiti, The Fanenitra. Raha tany Paris i Michelle no 23 taona, dia mitovy taona i Mette rehefa nihaona sy nanambady Paul Gauguin tany Frantsa izy.
Nanjary mpiara-miasa amin'ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray i Michelle
Peter dia niasa tamina diary iray, izay nahitana ny fandinihany an'i Gauguin, ary i Michelle dia nanolo-tena hanampy an'i Peter amin'ny fanovana ilay diary. Araka izany, tamin'ny 1997, dia tonga mpiara-miasa amin'ny fikarohana an'i Gauguin izy ireo ary nanoratra ny tantaran'ny tantaran'i Peter.
Fotoana fohy taorian'izay dia nosokafan'izy ireo ny iray amin'ireo boky biolojika voalohany novidian'i Michelle tao Gauguin. Nijery ny sary teo amin'ilay pejy i Peter ary hoy izy tamin'i Michelle: “Jereo, ianao io!” Peter dia nijery ny sarin'ny vadin'i Gauguin, Mette, ary ny fitoviana amin'i Michelle dia tsy azo lavina.
Nandinika tamim-pahanginana ny mety ho fahaterahan'i Paul sy i Mette Gauguin i Peter sy Michelle ary nandeha ny taona. Tao amin'ny 1999, nandao an'i Peter izay hatao mandritra ny herintaona an-dalam-pandrosoana manerantany, ary hosodoko ny rindrina rehefa nandeha izy. Nifandray tamin'i Michelle i Peter, mifanaraka aminy, toy ny nataon'i Paul tamin'i Mette fony izy tao Tahiti.
Michelle mandroaka ny Skogres Gaulain-Teekamp
I Michelle, nandritra ny fotoana fohy, dia nifindra tany amin'ny fanjakan'ny Washington mba ho akaikin'ny fianakaviany sy ny malalany tamin'ny fahazazany. Nandritra ny dia nataon'i Peter dia i Michelle no niasa mafy hikaroka momba an'i Gauguin ary izy no nahita ny sarisary pensilihazo nataon'i Gauguin naseho teo an-tampon'ity pejy ity. I Michelle no nahatsikaritra voalohany fa i Peter, tamin'ny fahazazany, dia nanao kopia tsy nahy ny sarin'i Gauguin.
Rehefa niverina tany Etazonia i Peter tamin'ny taona 2003, nahita trano fonenana ho azy ny renin'i Michelle, tany Bremerton, Washington ary nifindra i Peter. Tamin'izay i Michelle no nampiseho taminy ny fampitahana ilay sary, izay nahagaga an'i Peter.
Ny tena manokana dia nampiaiky volana an'i Petera tamin'ny endriny mifanaraka amin'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ho an'ny mpanakanto iray, hitan'i Peter izany ho toy ny fomba fijery miavaka sy mahazatra. Ny fampitahana ny sarin'i Peter sy Gauguin dia nanampy ny lisitr'ireo zava-niainana nitombo, izay nanombohan'i Petera nino fa mety ho ny fiverenana indray ao amin'ny vatana vaovao any Gauguin.
Noforonin'i Michelle lahatsary mahakasika ny endriky ny parlemantera: Ny firaisam-batana indray ao amin'ny vatana ary ny fanovàna ny fiarahamonina
Mba hijery ny lahatsarin'i Peter sy Michelle miaraka amin'i Paul sy i Mette dia mandehana Ny Mpiara-mianatra Am-pahaizana, Peter Teekamp ao amin'ny Haifa Israel.
Ny fanandraman'i Petera momba ny fiokoana saribakoly Paul Gauguin
Indray andro, rehefa nandeha namakivaky an'i Bremerton izy, dia nisy sary mihetsika iray nanindrona ny masony. Nisy toeram-pisakafoanana iray teo akaikin'ny rindrina ary niditra tao anaty kafe i Petera. Rehefa nandinika ny atin'ny trano izy, dia hitan'i Peter fa nisy vatomamy Gauguin tamin'ny vehivavy roa teny amoron-dranomasina. Nieritreritra i Peter fa io dia dika mitovy, famokarana, ny endriny Gauguin tany am-boalohany.
Nanontany ny tompony i Peter raha nahazo ny printy Gauguin. Ilay tompon'ny propagandy dia nitantara fa teo amin'ny nahazo ny renibeny reniny tao Guam ilay andian-dahatsoratra tany am-boalohany, izay nomena ny fanoratana ho fanomezana. Nanazava izy fa ny mponina teratany ao Guam dia nafindran'ny Japoney nandritra ny Ady Lehibe II. Nafenina tao anaty lava-bato ny renibeny ary ny fianakaviany mandra-pahatapitry ny fibodoana. Noraisiny ilay mari-pamantarana nandritra ny fotoana niafenany.
Taorian'ny ady, ny reniben-drenibeny dia nitahiry ilay sary tao an-tampon-tranony nandritra ny 33 taona hatramin'ny 1978, rehefa nomeny ny zanany vavy, renin'ny tompony. Ny tompony dia nandray izany avy amin'ny reniny. Rehefa nifindra monina tany Etazonia izy tamin'ny taona 1999, dia nentiny niaraka taminy ilay sary ary avy eo nahantony tamin'ny rindrin'ny trano fisakafoanana nisy azy io.
Ny tompony dia nilaza tamin'i Petera fa rehefa nesoriny ny solaitra tao amin'ny fitoeran-tsariny, dia nahita saribao teny an-tanany izy. Izany dia nahatsapa i Petera fa ny sary dia tsy kopia velively, fa ny marika famantarana ny charco tany am-boalohany. Raha tena nisy Gauguin tany am-piandohana, izay heverin'i Peter ho toy izany, dia ho an'arivony ny sarimihetsika.
Nolazain'ilay tompon-trano avy eo fa sahirana ara-bola izy ary nila vola mba hitazonana ny raharaham-barotra. Raha tokony ho niandry ilay sombin-taratasin-kaontina izy, dia nilaza ny tompony fa hivarotra ilay mari-pankasitrahana amin'ny $ 5000 amin'ny olona voalohany izay handoa azy io. Nanaiky hividy ilay mari-pamantarana i Peter ary nanome ny tompony $ 5000.
Raha tena voamarina ilay kisarisary, dia azon'i Peter Teekamp ilay toa zavakanto Gauguin tany am-boalohany. Ankoatr'izay, mahaliana fa hitan'i Peter ilay kisarisarin'i Gauguin tamin'ny taona 2003, izay faha 100 taona nahafatesan'i Gauguin.
Ny Paul Gauguin Charcoal Sketch dia amidy
Peter dia nanao fikarohana be dia be hanampiana hanamarina fa kisarisary Gauguin tena izy io. Ireo antoko liana amin'ny fividianana saribao ity, azafady mifandraisa amin'i Walter Semkiw, MD ao amin'ny: walter@reincarnationresearch.net
Reincarnation & Syndromeistic Syndrome: Karazana fifandraisana ara-panahy
Ny fiovan'ny toetrandro sy ny tsingerin-taona dia fomba ahafahan'ny tontolon'ny fanahy, anisan'izany ny fanahintsika, afaka mifandray amintsika. Tadidio fa nanana safidy hivezivezy na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao i Michelle ary nifidy an'i Tahiti izy, toerana nitsidihany ny Museum Gauguin. Nitsidika an'i Paris izy tamin'io taona io, izay nifanena tamin'i Paul Gauguin.
Synchronistic toy izany zava-nitranga, izaho manolotra, dia tsy foana tsy nahy, fa, izy ireo noho ny fikatsahana ara-panahy sy ny mpitarika amin 'ny fanahintsika, na dia telepathic hafatra izay efa za-draharaha toy ny intuitions sy ny faniriany.
Toy izany koa, azontsika atao ny mahita ny fahitan'i Peter ilay toa saribao saribao tany am-boalohany Gauguin tamin'ny faha-100 taona nahafatesan'i Gauguin ho hetsika an'ohatra. Izy io dia azo jerena ho toy ny hetsika namboarin'ny olona ao amin'ny tontolo ara-panahy, izay nitazona azy tamina intuition hitady ilay sary tao amin'ny fivarotana kafe Bremerton. Ity hetsika ity dia nanana tanjona hanamafisana an'i Peter fa izy no teraka ao amin'ny vatana vaovao ao Gauguin.
Nisy tranga toy izany koa nitranga tao amin'ny tranga vao teraka indray Carroll Beckwith | Robert Snow, satria nentin'ny Kapiteny Snow ny sary hoso-doko nataon'ilay vehivavy miondrika, izay namela azy hamaha ny tranga tamin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao. Ohatra hafa momba ny fitarihana toy izany any amin'ny toe-java-niseho ao amin'ny vatana vaovao indray no aseho ao amin'ny fizarana: Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara amin'ny trangan'aretina ao amin'ny vatana.
Fanekena ara-panahy ao amin'ny fasana teraka ao amin'ny vatana
Amin'ny hazavana mitovy amin'ny nitarihan'i Peter ho any amin'ny saribao saribao tamin'ny fidiran'ny fanahy fanahy, ny fihaonan'i Peter tamin'i Michelle tany California dia azo jerena fa tsy kisendrasendra, fa efa voafaritra mialoha. Manao fifanarahana na fifanarahana alohan'ny hahaterahantsika hihaona amin'ireo olona fantatsika tamin'ny fiainana taloha.
Mikasika ny zava-bitan'ny fiainana teo aloha
Ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray Paul Gauguin | Peter Teekamp, ​​raha ekena, dia tranga manan-tantara io, satria maneho fa mitadidy zava-bita azo tamin'ny nofo taloha isika, toy ny aseho amin'ny sary an-tsary Gauguin-Teekamp mifanitsy ary ny famerenan'i Peter sary an-tsary ny ezaka nataon'i Gauguin.
Mahaliana ihany koa ny mandinika ny fomba itovizan'ny lohahevitra ao amin'ny kanto Gauguin sy Teekamp ny fitoviana, na dia namorona fomba kanto amin'ny antsipiriany sy azo antoka kokoa aza i Peter. Izany dia aseho amin'ny fampitahana ny sary omena ankavanana. Amin'ity fampitahana ity dia eo an-kaviany i "Christ Yellow" an'i Paul Gauguin, eo afovoany ny "Presentation of the Christ" an'i Peter Teekamp ary eo amin'ny ankavanana ny dikantenin'i Peter Teekamp an'ny "Yellow Christ". Ny lohahevitra afovoany mandritra ny androm-piainana roa dia i Jesosy Kristy, na dia nivoatra aza ny fomba fandokoana.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endrik'i Peter Teekamp dia mifanaraka amin'ny an'i Paul Gauguin.
Ny fiainana taloha talenta: Peter dia naneho talenta ho an'ny zavakanto tamin'ny fahazazany ary tamin'ny taonan'ny formative, dia naveriny tsy nisy fahatsiarovan-tena ny fampiroboroboana ny kanto nataon'i Paul Gauguin, toy ny asehon'ireo sary mifampitohy. Na dia nanao ireo sarisary ireo aza i Peter tamin'ny taona 16 ka hatramin'ny 26, dia tsy nahita ny sary Gauguin hatramin'ny 2003 izy, 53 taona i Peter. Araka ny nomarihina, i Peter dia nanao ny sary tamin'ny taona taloha kokoa noho i Gauguin, toa an'i Gauguin nanao ireo sary tamin'ny 40 taona mahery. Mampiseho izany fa mandroso hatramin'ny androm-piainany isika, miorina amin'ny zava-bitan'ireo nofo taloha.
FAMPIANARANA SY FIVORIAM-BOLA novolavola tamin'ny alalan'ny fanambadiana: Nifanaraka tamin'i Michelle Moshay i Peter, izay toa ny fanambaràna indray ao amin'ny vatana vaovao indray Mette Gauguin, vadin'i Paul Gauguin. Na dia tsy ankafizina amin'ny vanim-potoana amin'izao vanimpotoana izao aza izy ireo dia lasa namana sy mpiara-miasa akaiky i Peter sy Michelle amin'ny fikarohana ny tranga tamin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao.
Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara sy fifandraisana ara-panahy: Azo inoana fa tafiditra tamin'ny famoronana toe-javatra izay nanampy an'i Petera hahatakatra fa izy no fampodiana ao amin'ny vovoka indray vao haingana an'i Paul Gauguin. Anisan'izany i Anja, vadiny taloha, Angela, ary ilay mpitsabo sivily tany Arizona, nilaza tamin'i Peter fa izy no toerany indray ao Gauguin. Ireo fanahy dia azo inoana fa nampiditra an-tsoratra an'ireny hevitra ireny tao an-tsain'i Angela sy ny sainy. Tadidio fa niseho tsy misy fahaleovan-tena ireo fisehoan-javatra ireo ary tsy nilaza tamin'ny mpitaiza mihitsy i Peter momba ny fifandraisany tamin'ny fiainana taloha niaraka tamin'i Gauguin.
Toy izany koa, i Petera dia azo inoana fa nitarika araka ny fanahy olombelona na ny ainy ho an'ny kafe-trano Bremerton, Washington, izay nahita ny Gauguin saribao, izay azo inoana fa ny tany am-boalohany Sketch nataon'ny Paul Gauguin. Nisy fitarihana toy izany koa notsongaina manokana momba ny tranga vao teraka indray Carroll Beckwith | Robert Snow, raha nentina tany New Orleans ny Kapiteny Snow mba haka sary an-tsaina ny vehivavy hipoitra, izay namela azy hamaha ny tranga tamin'ny maty ao aminy.